Shoetsaw — Steemkr
goldbloger934 in artzone
suueat nar m ko hkwanaarr parpell . suu k waatbrar dohkwaykalayy retrieval tawaatgarate Dane ng nhaint tautkyautkyee nhaint aatuu nayrartine taat eat . hkyarrlit harnaandaatj . shoetsaw hkwanaarr tait u aain mway tirahcsaran htaatpopyeehpyitparsai - harnaandaatj hkway puggolrayy samarr hcain hcarr . harnaandaatj saimyuumhu shihkyinn hkanhkaer aahkar warraint bharmha mhar sabhawpout me, hkwanaarr harnaandaatj rae hkyayhtout eat bhayyhtwataapaw nibble lain maal . htoaahkar hkway patipakhkamyarr k nay shuko paal swarr hkawsaungswarr sai soparhchoet, shuko hkya ngyaainsaat raan hcoerain puupaan hkyinn titehkitemhumyarr aatwin shu aapaw hkone . sayywarrmyarr nhaint aatuu paungghcaut mhartot harnaandaatjhkway Post- hcate htihkite hcatehpihceemhu rawgar shurae lakhkanartway k kuunyepayy hkae pyawwpartaal . " ngarsai nout tahpaanas kya shngya pot," aahku aamayrikaanpyihtaunghcu aamyoesarrahcaung tauthpwal k nay aangyaaimhcarr yuusaeet Bronx, nayuuyout, eat harnaandaatj, 49, k pyawwpartaal . " bhar ngarko m ae hcaung shout ngareatahkway parpell . " aamayrikaanluumyoe tait u k kyeehtwarrlar aarayaatwat k hcatekyannmarrayy loaauthkyetmyarr aatwat hkway lar pyehpyitkyaungg kyawmkyinsuumyarrk sokyasai . htokaeshoetsaw hkwanaarraahpyit hcaterawgar waansaungmhu tirihcsaranmyarr eata mhu , suuthoet k hcaterawgar, myin taatsaw- myethci hkway k luu myethci kaann hphoet kuunyepayyparraan swansain htarrparsai aamyarrkyee aatwat lam nhang aatuu luu ko kuunye aahtuu lae kyint sainkyarr lyetshisai . hcaitpyan pyanlaraatwat PTSD sai i hkwaymyarraatwat toemyahaint waalloaarr myarraatwat aadhikaaakyaunggrainn hpyitpartaal, yawhaan Ensminger tait uk New York shaenay nhaintrayysarrsuu " hu waansaungmhu nhaintaamayrikaan Society mharkuhtone Dogs ko . " tirihcsaranmyarr myarrsaw aarr hpyint hkwin mapyutae - hcarrsoutsine k nay hcatoesinemyarr mha lay yarinmha - ko po sisar rotepinesinerar masaanhcwm luu myarraatwat lamnywhaan hkway matuubhell tait u hkway nayrartwayko suuthoetko aatuu litepar shisai hphoet rashiswarrtae suu konhaint paatsaat. meehkoeraung eriyar aamyarrkyeeshipartaal .abhaal kyount luupaungg hcaterawgar waansaungmhuhkway get tahkyahoet luutwayaatwat, aain mway tirahcsaranmyarr nhaint aatuu aapyanaalhaan u nhaout htellmhar htellk dhartu paithcanyya aapyaunggaalellmyarrko htotelote, Hal Herzog,anawkyapongya kar ro line narr takkasolmha hcatepanyar parmawkhk k pyawwpartaal saw . tawtawlayy kaunggsaw saatsay aahtoutaahtarrshipartaal " tait lam thangya kyahanyaupyathoet aarrlone bharhpyitlhoetlellsotot kyanawthoet aout shisamyaha saw nay hcatehpihceemhu eat m yonekyi nine loutaaung pamarn eat tait u hcaterawgar waansaungmhu shoetmahote kuhtone hkway sone lhoetrataal," hcaterawgar douttarkarroe Lieberman eat hcarrayysuukapyawwpartaal " aakyamhpaatmhu nhaint aatuu rainsine hpyayshinn hkyinn . aiutmaatmyarr Interrupt" aain mway tirahcsaran hcaung shoutpopyee Self- loneloutsaw nhaint lonehkyuan, luutway lyawwnaee kyawwat l ant hpyitlar kuunye payysai . darhar suuthoetrae kopine hcoerainmhutway ko paal aarrone yuu, suu k sosai . aain mway tirahcsaran taitkaung pinesine mhat saintsain " sainsai aahkyarr sattawar myarreat hcaung shout mhu yuu ninetae koy ko ko mha saatsay pya," nongya suu k sosai . darhar " sain ko sain garuhcite nongya kwayarngya s ngya s nyya hci tya hk hcyay . " hcatekyannmarrayy pyaဿnarmyarrko aatuu luumyarr thoetaarr pyuhcu hcaung shout mhu payysaw hkway aamyarraapyarr aamyoeaahcarr hp naw ng maharmatemyarr ko hpawpyahtarr taal aahpwalaahcaeeaahpyit htwatpawlarpye pahtam u soneahkwanaarr kya routsaiabhaalmhar shi taw muu saw hcaterawgar waansaungmhu hkway hpyitparsai . i rwae karr, tait u hkyinn hcatepinesinerar masaanhcwm luu myarraatwat aapyinnaahtaan lae kyint sainkyarr hkway hpyitkyaeat . aasoparhcaterawgar Service ko hkway lhuaahpwalaahcaee sai i hkway nhang maishoet lae kyint sainkyarr nay tae hkway ko m r lout kyaal pya ant satainnaahkyetaalaat shipartaal . hp naw ng maharmatemyarr kyawwng aasoneaanhuann nhaint aatuu saathcaut aamaeehcaatmyarr " hcatekyannmarrayy waansaungmhu hkway" suuthoethkawso " hcaterawgar . " htoaahkar masaanhcwm luutwayko nhait si m hkyinn nhaint lhuansawmhu myarrkoarar hcatehkanhcarrmhu htouthkanmhu hkway shipartaal . suuthoet k lay yarin paw hkawsaungswarr nhaint tirihcsaranmyarr myarrsaw aarr hpyint saint lyaw saw hcarrwathcartammyarr nhaint aatuu hkwin mapyu tae aain rar aahkyayaanaymyarr twin aasaatshin nayhtine nineparsai . noutsoneaanaynae luu myarreat kyeemarrsaw aotehcu taithcu ko kuunye payysaw kuhtone hkway shipartaal . upamar, Ensminger raehkway Chloe tait kuhtone hkway hpyitpyee, suu sand aalyawwat luunar nha hcya si mya sayyronemyarr mha suumeat kyaar parsai . Lieberman rae makyaarsayyhkaink luunar tait u k yainn hcaterawgarhkway certified rashihtarrpyee get kuunyeraan hcartaithcaung rayysarrhkaesai bhaalsuukoabhhoet,abhaal suueat hkainpwann tait u layynaat, toetaatsaw sayybhaat sinerar rawgar shipyee aamyoesamee tait u hpyithkaesai, suu shuko hcaung shout tar ko k n saat mha s n hkanhcarrhkaer partaal . suumeathcan poodle " hu suumak suumeat hkainpwann myarrko aasonepyu hkaekyaungg, suu m hkainpwann mashibhell aaintaw htellk aahkar hcatepinesinerar aakuuaanye aahtoutaapanmyarr payy," Lieberman k sosai . suumeatnayaain foreclosure aatwat htarr kyawwng nouthtaut luunar sailaee aamyoesamee, hcatehpihceemhu shat shisai . suu m laee suu m aamayrikaandawlar saannpaunggmyarrhcwar ko pinesinemhu myarreat aalarraalar soneshonemhunhaint paatsaat. tait u tararrhcwalsomhunhaint countersuit aatwat parwain paatsaatrae Lieberman k sosai . suumeat kalayymyarr tinepyi aanhaan aasaatshin saw kyawwng hto meinm sai twayaamyarrkyee swarrlar shipartaal, nhaint suumeat hcatepinesinerar pyinaal taithkartaitran suu m aiutrarhtell k m r nongya saw htokaeshoetsaw hpyitpartaal . i kihchcatwin hkunhait, Lieberman kalayyngaal taithcaung hphoet kuhtone hkway nhaine yhain: nwayhtwaymhu eathkanhcarrhkyetmyarrko evoking nhaint hcaung shout hkawsaungswarr hkanrahkyinn . " darharamhuarar lyawwnaee hcate htihkite sawaahkar suumeat satipayy" hu suumak sosai . " darhar aatate karl tait lai hcaee parpell . " harnaandaatj 1996 hkunhaittwin aamyoesarrahcaung tauthpwal puupaungg nhaintsuu 2004 kanay 2006 hku nhahcyamha aeraat mha taut hpya ant hkaesaihcaattainbharl 11, 2001 raattwin myay pyin suny mhar pahtam u sone hpyaysosuu tait u hpyithkaesai . aeraat shi nayhcain, harnaandaatj k suueat lamshout hphoet hcwmrai nhaint tait u hcate htihkite u nhaout danrar k ant saat m ae kyawwroe danrar hkanhcarrhkaer sai . aatwinpine suu laee pyaungglell swarr hkaerasai . suu k aakyammahpaat nhaint tone hpyitlarhkaesai . hto mainn sai aiutmaatsoe, masaatmasar aatwaymyarr nhaint aiutmaat shihkaepartaal . " aarrlonekatot aanar myinnine naykyataal" hu suu kapyawwsai . " dark kyanawk luu k shinnpya pone ko hpw int . " harnaandaatj, ECAD aakuuaanye hkway lae nhaint mwayhpwarr hkaerataal kyaungg aahpwalaahcaee taithkueataahcateaapine HEAL Project mhatasaint 2010 hkunhait waansaungmhu hkway ko laathkanrashi hkaesai . hcemankein waansaungmhu hkway nhaintaatuu PTSD nhaint aatuu hcone taathcaitpyan HEAL . harnaandaatjnaysell HEAL hcemankein nhaint aatuu hcaytanarwaanhtam . " taithconetaithku mharywinnay par shin suu sitaal, ngar k htwat twats lhoet maraparbhuu," harnaandaatj hkwanaarr k sosai . " de hkway kopo Spider-Man sabhawmyoe shipartaal . " harnaandaatjnaysell PTSD myarraatwat sayywarr kyaar parsai . shin pawlu Aragon tait u 29 nhaitaarwal aangyaaimhcarrwarraintlaee PTSD shipartaal, darpaymaae
သူမလည်းသူမအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကိုပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အလားအလာဆုံးရှုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးတရားစွဲဆိုမှုနှင့် countersuit အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ရဲ့ Lieberman ကဆိုသည်။
ဒါဟာ "သင်ကိုယ်သင်ဂရုစိုက်နိုငျကွောငျးသငျသညျစိတျခစြေ။ " စိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများကိုအတူလူများတို့အားပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးသောခွေးအများအပြားအမျိုးအစားဖနောင့်မဟာမိတ်များကိုဖော်ပြထားတယ်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ထွက်ပေါ်လာပြီ ပထမဦးဆုံးအခွန်အားကျရောက်သည်အဘယ်မှာရှိတော်မူသောစိတ်ရောဂါဝန်ဆောင်မှုခွေးဖြစ်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်လူပေါင်းစိတ်ရောဂါဝန်ဆောင်မှုခွေး get တချို့လူတွေအတွက်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဦးနှောက်ထဲမှာထဲကဓာတုပစ်စညျးအပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်, Hal Herzog, အနောကျပိုငျးကာရိုလိုင်းနားတက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာပါမောက္ခကပြောပါတယ်သော
သူ၏နာမကိုခွန်အားပါပဲ။ သူကဝက်ဗရာဒိုခွေးကလေး retrieval တဝက်ဂရိတ် Dane င်နှင့်တပ်ကြပ်ကြီးနှင့်အတူနေရာတိုင်းတတ်၏။ ချားလ်စ်ဟာနန်ဒက်ဇ်။ သို့သော်ခွန်အားတစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ထက်ပိုပြီးဖြစ်ပါသည် - ဟာနန်ဒက်ဇ်ခွေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးသမားစဉ်းစား။ ဟာနန်ဒက်ဇ်သိမ်းယူမှုရှိခြင်းခံခဲ့ရအခါဝါရင့်ဘာမှမှားသဘောပေါက်မီ, ခွန်အားဟာနန်ဒက်ဇ်ရဲ့ခြေထောက်၏ဘေးထွက်အပေါ် nibble လိမ့်မယ်။ ထိုအခါခွေးပဋိပက္ခများကနေသူ့ကိုပယ်သွားခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့, သူ့ကိုချငြိမ်သက်ရန်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်းသူ့အပေါ်၌ခုန်။ ဆေးဝါးများနှင့်အတူပေါင်းစပ်မှာတော့ဟာနန်ဒက်ဇ်ခွေး Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါသူ့ရဲ့လက္ခဏာတွေကကူညီပေးခဲ့ပြောပါတယ်။ "ငါသည်နောက်တဖန်အသကျရှငျပေါ့," အခုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့ကနေအငြိမ်းစားယူသည့် Bronx, နယူးယောက်, ၏ဟာနန်ဒက်ဇ်, 49, ကပြောပါတယ်။ "
ဘာငါ့ကိုမယ့်စောင့်ရှောက်ငါ၏အခွေးပါပဲ။ " အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ဦးကကြီးထွားလာအရေအတွက်ကစိတ်ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်ခွေးလာပြီဖြစ်ကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများကဆိုကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောခွန်အားအဖြစ်စိတ်ရောဂါဝန်ဆောင်မှုတိရိစ္ဆာန်များ၏အမှု၌, သူတို့ကစိတ်ရောဂါ, မြင်တတ်သော-မျက်စိခွေးကလူမျက်စိကန်းဖို့ကူညီပေးပါရန်သွန်သင်ထားပါသည်အများကြီးအတွက်လမ်းနှင့်အတူလူကိုကူညီအထူးလေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။ စစ်ပြန်ပြန်လာအတွက် PTSD သည်ဤခွေးများအတွက်တိုးမြှင့်ဝယ်လိုအားများအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်, ယောဟန် Ensminger တစ်ဦးက New York ရှေ့နေနှင့်ရေးသားသူ "ဟုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အမေရိကန် Society မှာကုထုံး Dogs ကို။ " တိရိစ္ဆာန်များများသောအားဖြင့်ခွင့်မပြုတဲ့ - စားသောက်ဆိုင်ကနေစတိုးဆိုင်များမှလေယာဉ်မှ - ကိုပိုသိသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းလူများအတွက်လမ်းညွှန်ခွေးမတူဘဲတစ်ဦးခွေးနေရာတွေကိုသူတို့ကိုအတူလိုက်ပါရှိသည်ဖို့ရရှိသွားတဲ့သူကိုနှင့် ပတ်သက်. မီးခိုးရောင်ဧရိယာအများကြီးရှိပါတယ်။
။ တော်တော်လေးကောင်းသောသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် "တစ်လမ်းတှငျကြှနျုပျတို့အားလုံးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့အောက်၌ရှိသမျှသောနေစိတ်ဖိစီးမှု၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပမာဏ၏တစ်ဦးစိတ်ရောဂါဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ကုထုံးခွေးသုံးလို့ရတယ်," စိတ်ရောဂါဒေါက်တာကာရိုး Lieberman ၏စာရေးသူကပြောပါတယ် "အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း။ အိပ်မက်များ Interrupt" အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ပိုပြီး Self-လုံလောက်သောနှင့်လုံခြုံ, လူတွေလျော့နည်းကြောက်လန့်ဖြစ်လာကူညီပေးသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိုးရိမ်မှုတွေကိုပယ်အာရုံယူ, သူကဆိုသည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှတဆင့်သင် "သင်သည်အခြားသတ္တဝါများ၏စောင့်ရှောက်မှုယူနိုင်တဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှသက်သေပြ," နိုငျသူကဆိုသည်။
ဤရွေ့ကား, တစ်ဦးချင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းလူများအတွက်အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခွေးဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါစိတ်ရောဂါ Service ကိုခွေးလူ့အဖွဲ့အစည်းသည်ဤခွေးနှင့်မည်သို့လေ့ကျင့်သင်ကြားနေတဲ့ခွေးကိုမရလောက်ကျယ်ပြန့်သတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ်။ ဖနောင့်မဟာမိတ်များကြောင့်အသုံးအနှုန်းနှင့်အတူဆက်စပ်အမည်းစက်များ "စိတ်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုခွေး" သူတို့ခေါ်ဆို "စိတ်ရောဂါ။ " ထိုအခါမသန်စွမ်းလူတွေကိုနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုအရာစိတ်ခံစားမှုထောက်ခံမှုခွေးရှိပါတယ်။
ဥပမာ, Ensminger ရဲ့ခွေး Chloe တစ်ကုထုံးခွေးဖြစ်ပြီး, သူဆန္ဒအလျောက်လူနာနှစျသိမျ့ဆေးရုံများမှသူမ၏ကြာပါသည်။ Lieberman ရဲ့မကြာသေးခင်ကလူနာတစ်ဦးကယင်းစိတ်ရောဂါခွေး certified ရရှိထားပြီး get ကူညီရန်စာတစ်စောင်ရေးသားခဲ့သည်ဘယ်သူကိုအဘို့, အဘယ်သူ၏ခင်ပွန်းတစ်ဦးလေးနက်, တိုးတက်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောဂါရှိပြီးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, သူသူ့ကိုစောင့်ရှောက်တာကိုကန့်သတ်မှဆန့်ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ သူမ၏စံ poodle "ဟုသူမကသူမ၏ခင်ပွန်းများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း, သူမခင်ပွန်းမရှိဘဲအိမ်တော်ထဲကအခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များပေး," Lieberman ကဆိုသည်။ သူမ၏နေအိမ် foreclosure အတွက်ထားကြောင့်နောက်ထပ်လူနာသည်လည်းအမျိုးသမီး, စိတ်ဖိစီးမှုလျှက်ရှိသည်။
သူမ၏ကလေးများတိုင်းပြည်အနှံ့အသက်ရှင်သောကြောင့်ထိုမိန်းမသည်တွေအများကြီးသွားလာရှိပါတယ်, နှင့်သူမ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်တစ်ခါတစ်ရံသူမအိပ်ရာထဲကမရနိုငျသောထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Lieberman ကလေးငယ်တစ်စောင်ဖို့ကုထုံးခွေးနှိုင်းယှဉ်: နွေးထွေးမှု၏ခံစားချက်များကို evoking နှင့်စောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားခံရခြင်း။ "ဒါဟာအမှုအရာလျော့နည်းစိတ်ထိခိုက်သောအခါသူမ၏သတိပေး" ဟုသူမကဆိုသည်။ "ဒါဟာအတိတ်ကာလတစ်လည်စည်းပါပဲ။ " ဟာနန်ဒက်ဇ် 1996 ခုနှစ်တွင်အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းနှင့်သူ 2004 ကနေ 2006 ခုနှစျမှအီရတ်မှတပ်ဖြန့်ခဲ့သည်စက်တင်ဘာလ 11, 2001 ရက်တွင်မြေပြင်သုညမှာပထမဦးဆုံးဖြေဆိုသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ အီရတ်ရှိနေစဉ်, ဟာနန်ဒက်ဇ်ကသူ၏လမ်းလျှောက်ဖို့စွမ်းရည်နှင့်တစ်ဦးစိတ်ထိခိုက်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာကန့်သတ်မယ့်ကျောရိုးဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရသည်။ အတွင်းပိုင်းသူလည်းပြောင်းလဲသွားခဲ့ရသည်။ သူကအကြမ်းမဖက်နှင့်တုန်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုမင်းသည်အိပ်မက်ဆိုး, မသက်မသာအတွေးများနှင့်အိပ်မက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ "အားလုံးကတော့အနာမြင်နိုင်နေကြတယ်" ဟုသူကပြောသည်။ "ဒါကကျနော်ကလူကရှင်းပြပုံကိုဖွင့်။ " ဟာနန်ဒက်ဇ်, ECAD အကူအညီခွေးလေ့နှင့်မွေးဖွားခဲ့ရတယ်ကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်း HEAL Project မှတဆင့် 2010 ခုနှစ်ဝန်ဆောင်မှုခွေးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှုခွေးနှင့်အတူ PTSD နှင့်အတူစုံတက်စစ်ပြန် HEAL ။ ဟာနန်ဒက်ဇ်နေဆဲ HEAL စီမံကိန်းနှင့်အတူစေတနာ့ဝန်ထမ်း။ "တစ်စုံတစ်ခုမှားယွင်းနေပါလျှင်သူသိတယ်, ငါကထွက်တွက်ဆလို့မရပါဘူး," ဟာနန်ဒက်ဇ်ခွန်အားကဆိုသည်။ "ဒီခွေးကိုပို Spider-Man သဘောမျိုးရှိပါတယ်။ " ဟာနန်ဒက်ဇ်နေဆဲ PTSD များအတွက်ဆေးဝါးကြာပါသည်။ ရှင်ပေါလု Aragon တစ်ဦး 29 နှစ်အရွယ်အငြိမ်းစားဝါရင့်လည်း PTSD ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်
Congratulations @goldbloger9! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by goldbloger9 from the Minnow Support Project. It'sawitness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It'sacompletely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.